Abenzi beBuckles abavelisi kunye nabaxhasi - China iBuckles Factory
Umgangatho oPhakamileyo weBlue Buckle Wage Bag
Olona khetho lufanelekileyo lokukhetha kuthotho lweemveliso ezinje ngoobhaka, iibhegi zemithwalo, iingxowa zokuhamba, iminqwazi yokhuseleko, iisutikheyisi, kunye neleop yezilwanyana. Umgangatho ophezulu, ukunxiba ukuxhathisa, ukuqina okukhulu kunye nokuqina okuqinileyo ziimpawu zayo.
Inombolo yesitayile: SB125
imigaqo: 0.75 * 1 * 1.5
Umgangatho ophezulu we-POM woKhuseleko lweBack Buckle
Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-POM, zine-elasticity ephezulu kunye namandla okutsala onamandla. Iyahlala kwaye akukho lula ukuyiguga. Ukwamkela inkqubo yokuvelisa isiqwenga esinye, imiphetho yebuckle ijikelezwe kwaye igudile ngaphandle kokulimaza izandla zakho. Uyilo olujiyileyo akukho lula ukulonakalisa.
Inombolo yesitayile: SB032
I-POM Strong yoKhuselo lweNdalo esingqongileyo
I-buckle yokhuseleko yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ze-POM, enobungozi bendalo kunye nokuhlala ixesha elide, kwaye akukho lula ukuyonakalisa. Xa kuthelekiswa neeplastikhi eziqhelekileyo, kunwebeka ngakumbi kwaye inoluhlu olupheleleyo lweendlela zokuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo. Inokukubonelela ngeenkonzo ezilungiselelwe wena ukwenza ezakho iimveliso.
Inombolo yesitayile: SB015
Icandelo elinamandla lokufaka uthotho lweebhaksi, i-elasticity elungileyo, amandla okutsala awomeleleyo, omelele kwaye omelele, akukho lula ukuwa, ukucacisa okugcweleyo, ukujikeleza kunye nokujikeleza. Zilungele iingxowa zokunyuka intaba, iingxowa zokuhamba, iminqwazi, njl.
Inombolo yesitayile: SB011
Iibhegi zokuhamba ezihamba ngeBuckle ezinamandla
Yenziwe ngezinto ze-POM ngokusebenza kakuhle. Xa kuthelekiswa nezinto eziqhelekileyo zeplastiki, inamandla amakhulu kunye nokuqina okukhulu. Inoluhlu olubanzi lwezicelo, ihlala ixesha elide, kwaye akukho lula ukuyishiya. Zilungele iibhegi zohambo, iisutikheyisi, oobhaka, iminqwazi yokhuselo, njl njl.
Inombolo yesitayile: SB014